🥇 xisaabinta howlaha amaahda
Qiimeynta: 4.9. Tirada ururada: 85
Fiidiyowga xisaabinta howlaha deynta
Dalbo xisaabinta hawlgallada amaahda
Macaamilada amaahda waxaa si toos ah loogu diiwaangeliyaa barnaamijka USU Software, taas oo macnaheedu yahay in macaamil kasta oo amaah ah isla markiiba lagu soo bandhigi doono koontada iyo dhammaan dukumiintiyada la xiriira amaahda, oo ay ku jiraan tilmaanta midabka, oo lagu bixiyay nidaamka xisaabinta otomaatiga ah si loo hubiyo in la xakameeyo muuqaalka dhammaan howlaha taas oo dhacda markaad adeegayso amaah. Dhammaan hawlgallada waxaa lagu fuliyaa iyada oo aan laga qaybgelin shaqaalaha, markaa oggolaanshaha 'xisaabinta otomaatiga ah', taas oo ka dhigaysa xisaabinta dhabta ah mid aan waxtar badan lahayn, maadaama xawaaraha hawlgal kasta uu yahay jajab labaad, iyada oo aan loo eegin qadarka xogta ee ka baaraandegidda, laakiin si fudud waxtar u leh sababtoo ah dhammaystirka xogta caymiska ee la duubayo. Intaa waxaa dheer, xisaabinta otomaatiga ah, xisaabinta oo dhan ayaa sidoo kale loo sameeyaa si otomaatig ah, oo ay ku jiraan xisaabinta dulsaarka iyo isu-geynta ganaaxyada, dib u xisaabinta lacagaha marka sicirka sarrifka hadda ee lacagaha qalaad is beddelo haddii amaahda lagu bixiyo lacag ajnabi ah, iyo macaamillada amaahdaas oo kale lagu qabtay wax u dhigma qaran.
Xisaabinta hawlgallada amaahda ee lacagaha qalaad waxaa lagu fuliyaa isla mabaadi'da la midka ah amaahda caadiga ah, laakiin, sida caadiga ah, dhinacyadu waxay ku heshiiyeen sharcinimada wax kala iibsiga si dib loogu xisaabiyo lacag bixinta marka heerka sarrifka hadda ee lacagta ajaanibta ah ee amaahdan waxaa la soo saaray isbeddelo, haddii lacagta qalaad ay soo marto isbeddello daran. Waa in la ogaadaa in amaahda lacagaha qalaad, haddii ay tahay muddo-gaaban, ay aad uga faa'iido badan tahay amaahda lacagta waddanka tan iyo markii ay maqan tahay isbedbeddelka sicirka sarrifka ee lacagaha qalaad, hawlgallada ku saabsan deymaha noocan oo kale ah waxay u baahan yihiin dib-u-bixin ka hooseysa kiiska amaahda xaaladaha la midka ah ee lacagta maxalliga ah. Qaabeynta xisaabinta hawlgalada amaahda waxay si otomaatig ah ugu qaybisaa amaahda ‘ajnabiga’ noocyo, kuwaas oo lagu go’aaminayo ujeedooyinka amaahda lacagaha qalaad, deyn-bixiyeyaasha, heshiisyada, isla markaana si madax-bannaan u fuliya dhammaan noocyada hawlgallada ee lagu bixiyo dhibcaha adeegga ee lacagaha qalaad. Waajibaadyadeeda waxaa ka mid ah xakamaynta qoondaynta saxda ah ee ilaha amaahda, fulinta waajibaadka saaran waqtigooda, iyo u hoggaansanaanta shuruudaha sharciga sarrifka lacagaha qalaad.
Isku xidhka xisaabinta hawlgallada amaahda ee lacagaha qalaad ayaa si toos ah u tixgelin doona farqiga sarrifka ee dulsaarka dulsaarka, farqiga sarrifka ee bixinta deynta aasaasiga ah taariikhda lacag bixinta, sida ku cad jadwalka loogu talagalay, oo sidoo kale ah si madax-bannaan loo soo saaray qaabeynta. Xakamaynta lacagaha qalaad, si hufan, la socoshada sicirka ay hadda ku shaqeeyaan, nidaamka xisaabinta otomaatiga ah si toos ah ayuu u fuliyaa, haddii ay si xawli ah u socdaan, isla markiiba wuxuu sameeyaa hawlgallo dib loogu xisaabinayo lacag bixinta sida ay tahay heerka cusub, isagoo macaamiisha ugu wargelinaya tan si otomaatig ah xiriiradaas lagu soo bandhigay keydka macluumaadka, haddii barnaamijka lagu rakibay hay'adda maaliyadeed.
Xisaabinta howlaha lacagaha qalaad waxaa la sameeyaa marka la bixinayo lacagaha amaahda, inta lagu gudajiro howlaha dib u bixinta ama marka la soo celiyo. Si loo xisaabiyo dhammaan macaamillada, waxay ka diiwaangashan yihiin diiwaannada elektiroonigga ah tan iyo markii barnaamijku uu si adag u xakameynayo ilaha dhaqaalaha, isagoo dejinaya foomam gaar ah oo ay ku taxan yihiin macaamillada, kuwaas oo la qabtay intii lagu jiray muddada warbixinta oo ay ku jiraan faahfaahin faahfaahsan oo mid kasta oo iyaga ka mid ah, iyadoo la dejinayo taariikhaha, sababaha , dhiggooda, iyo tirada dadka masuulka ka ah hawlgalka.
Keydinta kheyraadka, oo ay ugu muhiimsan yihiin waqtiga iyo dhaqaalaha, waa howsha barnaamijka, sidaa darteed, wuxuu fududeynayaa dhammaan habraacyada sida ugu macquulsan iyo, taas awgeed, waa la dedejinayaa, iyadoo looga tagayo shaqaalaha hal masuul oo keliya - gelitaanka xogta, aasaasiga iyo hada. Si loo duubo macluumaadka ay ka heleen adeegsadayaasha, kalsoonidiisa iyo wax ku oolnimadeeda, joornaalada elektarooniga ah ee shaqsiga ah ayaa la bixiyaa, taas oo shaqaaluhu ku diraan farriimo ku saabsan ficiladooda ay ku qabteen gudashada waajibaadka. Iyada oo ku saleysan macluumaadkan, nidaamka otomaatiga ah wuxuu dib u xisaabiyaa tilmaamayaasha tilmaamaya xaaladda hadda jirta ee howlaha socda. Iyadoo lagu saleynayo tilmaamayaasha la cusbooneysiiyey, go'aannada maaraynta waxaa loo sameeyaa si loogu sii wado shaqada isla qaab ama in la saxo geeddi-socod kasta haddii leexinta tilmaamuhu dhabta ka yimaado midka la qorsheeyay ay weyn tahay. Sidaa darteed, shaqada shaqaaluhu waa mid muhiim ah, taas oo lagu qiimeeyo nidaamka xisaabinta marka la xisaabinayo mushaharka xoogaa yar ee isticmaalayaasha dhammaadka muddada warbixinta.
Barnaamijka laftiisu wuxuu xisaabiyaa mushahar bille ah ee shaqaale kasta, iyadoo la tixgelinayo tayada macluumaadka lagu dhajiyay diiwaanka shaqada, sidaa darteed shaqaaluhu waxay xiiseynayaan in lagu daro xogta waqtigeeda iyo kalsoonidooda. Xakameynta macluumaadka ka imanaya isticmaaleyaasha waxaa fuliya maareynta iyo nidaamka laftiisa, oo soo koobaya shaqooyinkan, maaddaama ay leeyihiin habab kala duwan oo qiimeyn ah, sidaasna ay isu dhammaystiraan midba midka kale. Maareynta ayaa hubisa diiwaanada shaqaalaha si loogu hogaansamo xaalada hada jirta ee shaqada, taas oo ay u adeegsadaan howsha hanti dhowrka, taas oo muujineysa sida saxda ah macluumaadka lagu soo daray nidaamka tan iyo baaritaankii ugu dambeeyay sidaasna ay ku dardar galiso. Nidaamka xisaabinta howlaha deynta ayaa ilaaliya xakamaynta tilmaamayaasha, dejinta hoos udhaxeysa dhexdooda, taas oo ka reebaysa khaladaadka.
Barnaamijka xisaabinta ee hawlgallada amaahdu waxay soo saaraan dhowr xog-ururin, oo ay ku jiraan khad wax soo saar, macmiil dhinaca CRM, xog ururin amaah, xog ururin dukumiinti, saldhig isticmaale, iyo xog ururin ku xiran. CRM waxay kakoobantahay taariikhda macaamil macaamil kasta laga bilaabo xilliga diiwaangelinta, oo ay kujiraan wicitaanada, shirarka, emaylka, qoraalada warsidaha, dukumiintiyada, iyo sawirada. Macluumaadka amaahdu waxay ka kooban yihiin taariikhda amaahda, oo ay ku jiraan taariikhda la soo saaray, xaddiga, dulsaarka dulsaarka, jadwalka dib u bixinta, isku ururinta ganaaxyada, deynta sameynta, iyo bixinta deynta. Xisaabinta macaamil ganacsi ee keydka amaahda ma qaadaneyso waqti badan maadaama codsi kasta uu leeyahay xaalad iyo midabba, sidaa darteed waxaad si indho indheyn ah ula socon kartaa xaaladdeeda hadda adigoon furin dukumiintiyo. Nidaamku wuxuu si gaar ah u taageeraa tilmaanta midabka ee tilmaamayaasha iyo heerarka si loo badbaadiyo waqtiga isticmaalayaasha. Midabku wuxuu muujinayaa heerka guusha ee natiijada la rabay.
Nidaamka xisaabinta ee howlaha deynta ayaa si gaar ah u taageeraya mideynta foomamka elektiroonigga ah. Waxay leeyihiin qaab isku mid ah buuxinta, isla qaybinta macluumaadka, iyo qalabka maaraynta. Barnaamijku wuxuu bixiyaa naqshad shaqsiyeed goobta shaqada - in kabadan 50 ikhtiyaariyada naqshadeynta ee isdhexgalka waxaana lagu dooran karaa wareejinta. Isticmaalayaashu waxay leeyihiin adeegyo shaqsiyeed iyo erey sir ah iyaga, kuwaas oo bixiya foomamka elektaroonigga ah ee shaqooyinka iyo xaddiga loo baahan yahay ee macluumaadka adeegga. Soo galitaanadu waxay sameystaan aag shaqo oo gooni ah - aag masuuliyadeed shaqsiyeed, halkaas oo dhammaan macluumaadka isticmaalaha lagu calaamadeeyo soo galid, taas oo ku habboon marka la raadinayo khaldan. Isku xirka adeegsadayaasha badan ayaa ka caawiya xalinta dhibaatada wadaagista marka dadka isticmaala ay wada qabtaan shaqo isku mar ah maadaama khilaafaadka keydinta xogta la baabi'inayo. Nidaamku wuxuu si madax-bannaan u soo saaraa dhammaan socodka dukumiintiga hadda jira, oo ay ku jiraan bayaannada maaliyadeed, khasab ku ah xakamaynta, xirmo buuxda oo dukumiintiyo ah si loo helo deyn.
Barnaamijku wuxuu hayaa diiwaanada tirakoobka joogtada ah ee dhammaan tilmaamayaasha waxqabadka, taas oo ka dhigaysa suurtogalnimada in la sameeyo qorshe wax ku ool ah muddada mustaqbalka, si loo saadaaliyo natiijooyinka. Iyada oo ku saleysan xisaabinta tirakoobka, dhammaan noocyada waxqabadyada waa la falanqeynayaa, oo ay ku jiraan qiimeynta waxtarka shaqaalaha, waxqabadka macmiilka, iyo wax soo saarka goobaha suuqgeynta. Falanqaynta dhammaan noocyada waxqabadyada, oo la bixiyo dhammaadka xilli-warbixineed kasta, waxay suurtogal ka dhigaysaa in si habboon loo waafajiyo hab-socodka, loona habeeyo macaamil-lacageedka. Barnaamijku wuxuu taageeraa isgaarsiinta wax ku oolka ah - gudo iyo dibadba, marka ugu horeysa daaqadaha pop-up-ka, isgaarsiinta labaad ee elektarooniga ah - emayl, SMS, Viber, iyo wicitaanada codka.